Damaakasee – Ethipian Press Agency
Dhibeewwan daddarboo ta’an yeroo jennu dhibeewwan karaa garaagaraatiin bineensarraa namatti ykn namarraa namatti daddarban jechuu keenya. Baattuuwwan dhibee kanaa kan ta’an gara namaatti karaa garaagaraatiin daddabarsuu danda’u. Garaa kaasaan sababa rifachuu mar’imaan...	Read more »
Dhukkuboota qoricha waliin walbaran
Jarmiileen qoricha waliin walbaruun maal maalirraa ka’a? Yeoo garaagaraatti jarmiileen garaagaraa karaa adda addaan gara kutaa qaama keenyaa seenuun dhiibbaa cimaa namarraan geessisu. Jarmiileen lubbuu qaban dhukkuboota adda addaa namatti fidan kunniinis...	Read more »
Tamboo, Alkooliifi Fayyaa keenya
Yeroo ammaa kana addunyaa keenyarratti tamboo xuuxuun babal’achaa jira. Ga’eessota qofaa osoo hintaane daa’immaniifi dubartootni hedduun araada tamboo xuuxuun qabamanii jiru. Tamboo ofiin qabsiifatanii xuuxuu qofa osoo hintaane namoota tamboo aarsan yeroo...	Read more »
Hir’ina nyaataa (Malnutration)
Wantoota bu’uuraa dhala namaaf barbaachisan keessaa tokko nyaatadha. Guyyaa guyyaatti anniisaan keessa keenyatti gubatee akka lubbuun jiraannu nu taasisu nyaata nuti nyaatnu irraa argama. Akkasumas, namni tokko qaamnisaa yeroo yerootti ijaaramee diigamaafi...	Read more »
Tiruun qaamolee dhala namaa jiraachuuf dirqama barbaachisan (vital organ) jedhaman keessaa isa tokko yoo ta’u, ga’ee hojii hedduu ta’e kan qabuudha. Tiruun dhala namaa kan argamu, Garaa gara handhuuraa olii gama mirgaatiini....	Read more »
Fayyaa walhormaataafi saalquunnamtii
Hawaasa keenya keessatti wanta baratame keessaa tokko rakkoo fayyaa qaama walhormaataan walqabatan ykn walquunnamtii saalaa waliin walqabatanii dhufan mana yaalaa dhufee ykn maatiif hiriyoota isaatti himachuu saalfata. Kunimmoo rakkoowwaan garaagaraaf yeroo isaan...	Read more »
Fayyaa dubartootaa Marsaa laguu (xurii) dubartootaa
Marsaan laguu (xurii) dubartootaa sababa jijjiiramuu hormooniirraan kan ka’e kan baatii baatiin gadameessa dubartootaa keessaa dhiiga dhangala’u dha. Shamarran tokko marsaa laguu kan arguu jalqabdu avereejiitti waggaa 13 irraa kaaseeti. Marsaan laguu...	Read more »
Dhukkubni kaansarii maali?
Dhalli namaa erga dhalatee ni guddata, ulfaatinaan, dheerinaan waan hundaan dabalaa deema. Seelonni qaama namaa keessaa yeroo yerootti du’aa, dhalataa, jijjiiramaafi bakka walbuusaa deemu. Fakkeenyaaf seelonni dhiigaa diimaa qaama namaa Umuriin isaanii...	Read more »
Rakkoo walsimachuu dhabuu gartuu dhiigaa abbaa warraa, haada warraafi daa’ímaa
Abbaan warraa gartuun dhiigasaa Rh Poozativii (Rh+ve) ta’eefi haati warraa gartuun dhiigashee Rh negativii (Rh-) taate yoo walfuudhanii dhala godhachuu barbaadan; ulfa uumamu (mucaa garaa keessaa) irratti dhiibbaa akkamii fiduu mala? Akkuma...	Read more »
Iccitii sammuu keenyaafi ofeeggannoo taasisuufii qabnu
Namoonni baay’een kutaa qaamasaanii kamirrayyuu caalaa waa’ee sammuusaanii irratti hubannaa gadi fagoo utuu qabaatanii isaanitti tola. Haa ta’u garuu, qorattoonni sammuu akka ibsanitti waa’een sammuu saayinsii bal’aafi walxaxaa akka qorannaa pilaaneetoota hawwaa...	Read more »